Singapore: Fahatezerana Noho ny Fampijaliana Atao Amin’ny Be-Antitra Marary · Global Voices teny Malagasy
Singapore: Fahatezerana Noho ny Fampijaliana Atao Amin'ny Be-Antitra Marary
Voadika ny 20 Jona 2011 17:46 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Nederlands, Español, Ελληνικά, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Antsoina hoe Trano Fitaizan'i Nightingale ilay Toeram-pitsaboana, kanefa hita fa lavitra dia lavitra amin'i Florence Nightingale ny ataon'ny infirmiera.
Tafintohina sy sanganehana ireo Singaporiana taorian’ny fahitana ilay horonantsary miafina mampiseho ny fampijaliana natao tamin’ilay ramatoa 75 taona tao amin’io toeram-pitsaboana io, nalefa tao amin’ny YouTube izany ny herinandro lasa teo. Mampiseho ilay mpitsabo mpanampy mamelaka tehamaina ilay marary efa lazondazony nampatoriana teo ambony fandriana ny horonantsary:
Singaporiana maro no nitaky ny hanasaziana ireo mpitsabo mpanampy mpanararaotra. Javert's World nanoratra toy izao:
Tokony ho fantatry ny vahoaka koa hoe inona no sazy nampiharina tamin’ireo mpiasa, mety ho fampitandremana am-bava fotsiny ve? Tokony ho saziana ihany koa ny lehiben’ny Toeram-pitsaboana ary tokony omena onitra ilay niharan’ny fomba fikarakarana mahamenatra.
Mety hahazo ny olona tsirairay avy izany ary diso fanantenana aho satria tato Singapour no nitrangan’izany.
Nanamarika I Ruben Chan fa Singaporiana vitsivitsy ihany no maniry hikarakara sy hitsabo ny ray aman-dreniny izay efa antitra:
Fa inona no mety antenainao raha navelantsika ho an’ireo mpiasa an-tselika ny fomba fikarakarana ny zokiolona taloha tsy tian’ny Singaporiana atao. Asa mila fandavantena ny asan'ny infirmiera fa tsy asa izay tian’ny Singaporiana hatao. Raha te-ho dokotera mahafinaritra, eny. Raha te ho mpitsabo mpanampy mamafa ny “fitrombenan'” ny marary, tsia. Tsy maintsy miatrika ny fikizitinan’ny olona antitra izay tsy tian’ny zanany naterany atrehina ny mpitsabo mpanampy. Raha fantatr’izy ireo fa mety tsy mikarakara am-pahamendrehana ireo olona antitra ny zanaka naterany, koa nahoana izy ireo no hanao izany. Tsy ny olon-drehetra no Florence Nightingale na i Mamera Theresa
Manahy I Loh sy behold fa mbola mety misy koa ny tranga fanararaotana eny amin’ny toeram-pitsaboana hafa:
Tokony hofantarina ny zavatra tratra aoriana rehetra nataon'ny Toeram-pitaizana Nightingale, atsipy ao amin’ny fonja tahaka ny fomba nanipazany ilay vavy antitra tao anaty fandriana, ary tokony hampikatona maharitra ny lakile.
Firy ireo tranga fanitsakitsahana hiharihary vao ho raisina vao hanao zavatra amim-pahamatorana?
Any amin’ny toeram-pikarakarana tahaka itony, izay ahitana ny mpiray efitra tsy nianatra mety ho tsy ampy kely, hitako eto sahady ny horohoro miseho ao.
Minoa ho fa mbola misy tranga fanararaotana hafa izay tsy fantatry ny olona.
Fantatra fa efa nitondra ny raharaha teo ampelan-tanan’ny manam-pahefana misahana ny fahasalamana ny zanakalahin’ilay vavy antitra tao amin’ny horonantsary, maherin’ny telo volana lasa izay. Mihevitra ny mpanoratra sasany fa “nampanginin'ny” governemanta ilay raharaha nandritra ny hetsika tamin'ny volana lasa teo.
Tanatin'ny fivoaran-draharaha, naaton’ny governemanta vonjimaika ny fandraisan'ilay toeram-pitsaboana olona vaovao hotaizana. Hitan'i mrbrown.com ho hafahafa raha ny fanankatonana ihany no hany sazy nomena ny toeram-pitaizana:
Tsy nisy ny noenjehina, tsy nisy ny loha tapaka noho ity raharaha ity, fa nankatona vonjimaika tsy mahazo mandray marary vaovao fotsiny ny toeram-pitsaboana.
Fanehoan-kevitra sasantsasany tao amin’ny Twitter sy Facebook:
@Evan_Lby: manandrana karazana mpitolona vaovao ny Toeram-pitaizana Nightingale? Atsipy eny am-pandriana ny antitra, mamelaka tehamaina ny vava…
Chan CL: Tokony nakaton'ny Manampahefana misahana ny Fahasalamana io toeram-pitsaboana io. Henatra ho azy ny anaran'ny toeram-pitaizana
Niteraka adihevitra mikasika ny hatsaran'ny fitsaboana ao Singapore ny zava-nitranga. Nandinika ny amin'ny fepetra sasany hoentina hanatsarana ny fomba fitsaboana ho an'ny beantitra ao Singapore i Therese Leung sy i Sumytra Menon:
Ao anatin'ny fotoana maharitra, tokony amboarina indray mandeha ny karaman'ny mpiasa teratany manao asa maharitra ny toera-pitsaboana sy fikarakarana mba hampihenana ny fiankinantsika amin'ny mpiasa vahiny. Manolo-kevitra amin'ny fanamboarana ny rafitra vaovao izahay amin'io asa io, mikasika ny karama, ny fivoaran'ny asa, ary ny fanaraha-maso.
Ny fikarohana natao no mampiseho fa manatsara ny fanintonana sy ny fitazonana ny mpiasa haharitra eo amin'ny asan'ny fitsaboana sy ny fitaizana ny fanondrotana ny sandan'ny karamany. Tsy tokony omena toy ny tombotsoa indray mandeha ny fanondrotana ny karama fa ampidirina anaty ambaratongan-taona izay manome vahana ny isan'ny taona niasana.
Araka ny hevitry ny mpanoratra, farafahakeliny iray amin'ny 12 amin'ny mponina Singaporiana no ho 65 taona amin'ny 2030, ho zokiolona ny iray ampahadimin'ny mponina.
Shina 15 ora izay